ယနေ့ဆေး ၀ ယ်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်ဆေးဆိုင် ၅ ဆိုင် - ကျန်းမာရေး | မေ 2022
ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီသတင်း နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ သတင်း၊ ရပ်ရွာ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> ယနေ့ကြိုးစားရန် Over-the-Counter Hangover ကုထုံး ၅ ခု
1. Alka Seltzer နံနက်ကယ်ဆယ်ရေး
Alka Seltzer ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ အရက်နာကျပုံသေနည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကဖင်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည့်အမြင့်ဆုံးသောနာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေးပါ ၀ င်သည်။
Hangovers အတွက် ၂. Blowfish
Alka Seltzer ကယ်ဆယ်ရေးဆင်တူ၊ ငါးသေတ္တာ တက်ဘလက်များသည်အက်စပရင်၊ ကဖိန်းနှင့် antacid တို့ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ သူတို့ရဲ့သံပုရာအရသာကပိုအရသာရှိမှာအသေအချာပဲ၊ ဒီဖန်ခွက်ကြီးကမင်းရဲ့ ဦး ခေါင်း၊ အစာအိမ်နဲ့ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုကူညီရင်းနည်းနည်းလောက်ကြိုစားပေးတယ်။
KGB မှသူတို့၏လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်သူလျှိုကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်ဟုယူဆရသည် RU-21 အရက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကိုပိုမြန်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ ၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအရက်မှ acetaldehyde ကိုဖြိုဖျက်ပြီးဗီတာမင် C, B-vitamins, amino acids, dextrose နှင့်ဂလူးကို့စ်ကဲ့သို့ဆုံးရှုံးသွားသောဗီတာမင်များကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ RU-21 သည်အရက်နာကျသောရောဂါများကိုကုသခြင်းထက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် detox အတွက်ကူညီပေးရန်အာရုံစိုက်မှုကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
အရက်နာကျခြင်းကိုအောင်မြင်စေသောပါဝင်ပစ္စည်းများအနည်းငယ်ပါ ၀ င်သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖော်မြူလာ သနားခြင်းကရုဏာ အရက်နာကျခြင်းကိုသောက်ခြင်းနှင့်ဝါးစားနိုင်သောပုံစံဖြင့်လာသည်။ ဗီတာမင်ဘီ၊ ​​ဗီတာမင်စီ၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့်နို့ဆူးပင်တို့အပါအ ၀ င်အရာများစွာပါ ၀ င်သည်။
နောက်ထပ် fizzy တက်ဘလက်၊ Berocca အရက်နာကျခြင်းအတွက်အထူးစျေးကွက်တင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစိုက်မှုအတွက်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ရောင်းချသော်လည်း၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းအတွက်ကူညီသည်။ Berocca ကို B vitamins, vitamin C, zinc, calcium, magnesium, guarana extract နှင့် caffeine တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အကောင်းဆုံး Hangover Cures၊ အချိုရည်နှင့်ကုစားနည်း ၅ မျိုး
မင်းကိုပြုံးပျော်ဖို့အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်မှု ၅ ပုဒ်
အရသာရှိသော Detox သောက်နည်း ၅ မျိုး
tretinoin cream 0.1 ကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲ
ဆီးချိုကြောင့် erectile dysfunction အတွက်သဘာဝကုထုံးများ
melatonin ၁၀ မီလီဂရမ်ကိုသင်မည်မျှသောက်နိုင်သနည်း
၅/၃၂၅ မြင့်ရန် vicodin မည်မျှ